Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. हङकङमा सरकार विरोध प्रदर्शन जारी: हवाई सेवा प्रभावित, चीनले पठायो सेना – Emountain TV
एजेन्सी, २९ साउन । हङकङमा सरकारको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनका कारण हवाई सेवा प्रभावित भएको छ ।
सोमबारदेखि प्रदर्शनकारीले हङकङ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल वरपर प्रदर्शन जारी राखेका छन् । प्रदर्शनकारीले विमानस्थल पुग्ने मार्गहरु घेराबन्दी गरेका कारण यात्रु विमानस्थलसम्म पुग्न नसकेको र यसले सेवा प्रभावित भएको जनाइएको छ । यसैबिच चीनले हङकङको सीमा क्षेत्रमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको तस्बिरमा सैनिक तथा प्रहरीको दस्ता सीमा क्षेत्रको शेन्जेन शहरमा पुगेको देखिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गुप्तचर सूचनामा चीनले हङकङसँगको सीमा क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरेको जानकारी आएको ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् । मुख्यगरी विमानस्थलको बाहिरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भएका खबर पनि छन् । प्रहरीले पेपर स्प्रे प्रहार गरेको जनाइएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि जारी छ । प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको भए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन ।
पूर्वी चीनमा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३० पुग्यो